Kaddib kusoo biiristii Bile, Macaani, Xasan Afgooye iyo Xasan Siidoow, sidee noqon kartaa shaxda Dekedda xilli ciyaareedka soo socdo – Gool FM
Kaddib kusoo biiristii Bile, Macaani, Xasan Afgooye iyo Xasan Siidoow, sidee noqon kartaa shaxda Dekedda xilli ciyaareedka soo socdo
jilacow July 4, 2016
(Muqdisho) 04 Luulyo 2016. Kooxda Dekedda ayaa lasoo wareegtay xiddigo gaaraya ilaa iyo afar xiddig kuwaas oo u ciyaarayay kooxaha Saxafi iyo Elman.
Naadiga kaalinta labaad kasoo gashay horyaalka Soomaaliya ayaa fasaxday ciyaaryahanada kala ah Maxamed Abshir Abuukar Shooli, Cabdi Naasir Nuur Naaseey, Bashiir Aadan Imaan, Maxamed Bashiir Cusmaan iyo Maslax Xasan waxaana qaarkood ay ahaayeen shax koowaad ee macallin Cabdi Joon.
Kooxda ayaa waxaa ku cusub Bille Muxudiin Buraale oo ka ciyaara weerarka, Macaani oo isna ka dagaalama khadka dhexe iyo Xasan Siidoow iyo Xasan Afgooye oo kamid ah daafacyada ugu wanaagsan Soomaaliya.
Tan iyo markii xilka tababaranimo ee kooxda Dekedda loo dhiibay Cabdi Joon ayaa waxaa yimid is bedel weyn, waxaana sanadkii u dambeysay kooxda horyaalka loogu qaaday kaliya lix dhibcood, iyadoo gashay kaalinta labaad.
W/D: Mahad Shariif Jilacoow
Akhriso liiska xiddigaha ay iska fasaxday kooxda Dekedda
Didier Deschamps oo ku tilmaamay xulka qaranka Germany kan ugu fiican aduunka